Maamulka Degmada Dolo bay Ee Gobolka AFdheer ayaa sheegay in Barnaamijka Horumarinta Wabiyada iyo Dooxooyinka(Dajinta) Natiijooyin fiican laga soo hooyay - Cakaara News
Dolo-bay(CakaaraNews) Isniin Nv 25,2013.Sidaanu hore idiinku sheegnayba waxaa waayadanba Dhex-jibaaxayay Gobolada Liibaan iyo Afdheer wariyayaasha Shabakada cakaaranews ee fogaan araga wararka ka soo shalwiya waa wariye C.Ciise Cakaaree.
Wariyaha ayaa sida uu soo tebiyay waraysi uu la yeeshay Gudoomiyaha Degmada Dolo bay Ee gobolka Afdheer Mudane Cabdi Muuse Daahir oo uu wax ka waydiiyay Guud ahaan heerka waxqabadka qaab-dhismeedyada Maamulka DegmadaDollo-Bay Gaar ahaan Heerka uu gaadhsiisan yahay Hirgalinta Barnaamijka ka faaiidaysiga Horumarinta Wabiyada iyo Dooxooyinka ee Dibudejinta loogu sameeyay Qoysaska Degmada Dolo-Bay.
Gudoomiyaha oo ku sugnaa xiligaas xafiiskiisa ayaa Xafiiskiisa ayaa wariyaha faahfaahin buuxda ka siiyay waxqabadka Qaab-dhismeedyada Maamulka Degmada Dolo-bay in uu heer fiican marayo Dhanka waxbarashada,Caafimaadka,Beeraha iyo ka faaiidaysiga Biyaha wabiyada.
Masuulkan ayaa intaa ku daray Mar uu ka warbixinayaya Barnaamijka Dibudejinta Qoysaska Agagaarka wabiga ayaa uu sheegay in sadexdii sano Ee ugu danbaysay ladajiyay Dolo-bay 18,000kun oo Qoys oo ahaan jiray Xoolo-dhaqato balse wakhtixaadirkan Ka Faa`iidaysta Nidaamka xoolo-Dhaqato Beeralayda leh Nolol Degan oo ay Xukuumadu ugu dhamaystirto Dhamaanba Adeegyada aasaasiga ah iyo Kaabayaasha Dhaqaalaba islamarkaana Muruqooda iyo maskaxdooda wax kula soo baxaan.
Mudane Cabdi oo sii awata hadalkiisii ayaa Tibaaxay in Bulshadan ama Qoysaskan Ladajiyay 12 goobood oo Kamida Degmada Isla markaana ah Goobaha ay Wabiyadu Maraan si ay uga faa'iidaystaan Wax-soosaarka Dalagyada Beeraha waxaana Sidoo kale Bulshadan loo Dhamaystiray Adeegyada Aas-aasiga u ah Noloshooda Sida Waxbarashada Caafimaadka biyaha Nadiifta ah,Qalabka Beeraha iyo Abuurka-Gashiga beeraha.
Gudoomiyaha Ayaa sidoo kale Tilmaamay in Si kor loogu qaado Waxsoosaarka ay beertaan Bulshadan Dajinta loo Sameeyay la gaadhsiiyay Abuur tayaysan iyo Matoorada Waraabka iyadoo Bulshada laysugu Xidhayo Qaab-Iskaashato si loo mideeyo Xoogooda looguna abuuro Ilo-dhaqaale iyo Dhigaal ay ku maareeyaan Nolosha Qoysaskooda. isku soo wada duuboo Degmadan Dolo bay Ayaa Kamida Degmooyinka Uu Sida fiican uga hirgalay Barnaamijka Dajinta Ee Bulshada xoolo Dhaqatada loogu Abuurayo Nolol Dagan